रहरमा मात्र आएर हुँदैन, भित्रि खुवि पनि हुनुपर्छ: गायिका केसी - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
छुट्टै प्रकारको जोश, जाँगर भएकी गायिका रिता केसी ६/७ वर्ष आगाढि देखि नै यो क्षेत्रमा आफुलाई अब्बल बनाउन गीत गाएर सांगितिक यात्रामा होमिइन् । हरेक विधाको गित निकालेकी गायिका केसी भविष्यमा पनि गीतसंगितकै क्षेत्रमा लागिरहने बताउँछिन् । गायिका केसीसँग नेपालपाटीको यसिमा महतले गरेको कुराकानीः
सानैदेखि गित गाउने गर्थे त्यहि इन्ट्रेष्ट बढ्दै गयो । त्यसपछि एस एल सि पछि गायन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिएर अगाढि बढेको हुँ ।
पहिला र अहिले सम्मको समयमा हेर्दा तपाईलाई क्षेत्र कस्तो लाग्छ ?
म यो क्षेत्रमा लागेको धेरै भएको छैन । ७–८ वर्ष भयो गायन क्षेत्रमा लागेको त्यो भन्दा अगाढि कस्तो थियो त्यो थाहा भएन तर त्यो भन्दा पछाडि राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु । यो क्षेत्रमा राम्रो गर्नेलाई राम्रो छ । रहरमा मात्र आएर हुँदैन, भित्रि खुवि पनि हुनुपर्छ ।
अब चाँहि कस्तो हुनुपर्छ त ?
यो क्षेत्र भनेको राम्रो क्षेत्र हो । कलाकारितामा लागेर सबै नराम्रो हुन्नन् । कुनै कुनै एक दुई जना त्यस्तै खालका हुन्छन् तर सबै हुँदैनन् । त्यसैले बदनाम, अमर्यादित भएपनि म चाँहि मर्यादित बनाउन चाहान्छु । अरु क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्रले पनि माया पाओस, इज्जत पाओस र यहि देख्न चाहान्छु राम्रो राम्रो कलाकारको आगमन होस् ।
मैले पनि कतिसम्म गर्नसक्छु यो क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन त्यो सँधै पहल हुनेछ । र जिवन मरण सम्म मैले यो क्षेत्र छोड्नेछैन सँधैभरी गाउने छु । मेरो शरिरले साथ दिएसम्म ।
कस्तो टाइपको गित गाउनुभयो अहिलेसम्म ?
रिता केसि भनेपछि सबै टाइपको गाउने व्यक्ति भनेर चिन्छन् । मैले हिन्दि, आधुनिक, पप, भाषाभाषि, (थारु, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, नेवारी), लोक सबै गाउने गरेकी छु । मैले पनि हरेक विधाको गित गाउन रुचाउँछु र सबै विधाको मान्छेसँग घुलमिल हुन पनि मन पर्छ ।
सबै खालको गाउँछु भन्नुभयो तर तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने कस्तो खालको गित हो ?
एकदमै भित्रि आनन्द लाग्ने मलाई मेलोडियस गितहरु मनपर्छ । आधुनिक, लोक जुनसुकै होस तर मेलोडियस गितले मलाई टर्च गर्छ ।
आजभोली पहिलेका जस्ता गित निक्लिन छोड्यो नि ?
यस्तो हुँदा दुःख लाग्छ । हाम्रो पनि यो क्षेत्रलाई अलिकति मर्यादित बनाउन र सुन्न चाहान्छु म पनि । तर मेरो गितमा त्यस्तो पन कहिल्यै पनि भेटिँदैन । जे जस्तो छ समाजमा छ त्यस्तै खालको कुरालाई गितमार्फत सुनाउने गरेकी छु । मैले पनि देखिरहेकि छु ।
आफ्ना परिवारसँग बसेर पनि हेर्न नसक्ने गितहरु पनि छन् । तर यो गितको सबै पक्षलाई दोष दिन चाहान्छु । चाहे गायक, गायिका, लेख्ने मान्छे होस, सबैले गरेर नै त्यो गित बाहिर आएको हो नि । एउटाले मात्र गर्दा हुने हैन त्यसैले म त टिमलाई नै दोष दिन्छु । त्यस्तो गित नआओस हाम्रो समाजमा राम्रो गितहरु मात्रै आओस सबै खालको गित आवस कामना त्यहि छ मेरो ।
तपाईले यस्ता गित अहिलेसम्म निकाल्नु भएन त्यस्तो भए ?
विल्कुलै छैन । चलचित्रमा गाइन्छ, कथावद्र्धक गित, हरेक विधाको गित गाउँदा त्यस्को कथा बोकेर गाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो उच्छट खालको गित गाको छैन । तिजको पनि मेरो विल्कुल फरक खालको गित रहेको छ । अहिलेको पुस्तालाई मन पर्ने भए पनि त्यस्तो उच्च्छड छैन ।
म आफैले अभिनय गरेकी छु । आफैले नाँचेकी छु । जय शिव शंकर, बम बम भोले, मलाई मन पराउने माया कस्तो होला ? निकालेकी छु । एउटा अविवाहित महिलाले आफ्नो शिवसँग मेरो माया कस्तो होला भनेर बर मागेको गित निकालेको हुँ । त्यसैले मेरो गितहरु त्यस्ता छैनन् । धेरैले मन पराउनुभएको छ ।
यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म चाँहि तपाईंले के–के गर्नुभयो ?
मैले आफै एक्टिङ गरेर नाचेको पहिलो चोटि यसपाली हो । मलाई धेरैले रिता जी तपाई पनि आफैँ खेल्नुस् न भन्ने प्रतिक्रिया आयो त्यसैले यसपालीको तिज गितमा आफै गरेकी छु सबै । तर गाउनमा मैले १ सय ७५ भन्दा माथि गितमा चलचित्र, आधुनिक, लोक, पप सबै गरेर गाइसकेकी छु । दुईवटा अवार्ड पनि पाए । र अहिले म्युजिकमा नै मास्टर डिग्री गर्दै छु ।
मेरो योजना भनेको राम्रो राम्रो गित बजारमा ल्याउने हो । हाम्रो समाजमा मिल्ने खालको सुहाउँदो किसिमको गित ल्याएर स्रोताको मन जित्ने हो । देश विदेशका धेरै कार्यक्रममा हिड्छु, अझै समय दिएर लागिपर्ने छु । नेपाल तथा नेपाल बाहिर बस्ने सबैलाई मनोरञ्जन दिएर ।
यो क्षेत्रमा लागेर तपाइले आफूलाई के फरक पाउनुभयो ?
आफूले आफैलाई हेर्दा पहिला सुरु सुरुमा नयाँ थिएँ, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । गाउन, चिन्न सबैलाई । अहिले म त्यो पाउँदिन सबै फरक छ । अहिले हरेक ठाउँबाट फोन आउँछ गित गाइदिनुस्, कार्यक्रममा आइदिनुस् भनेर देश विदेशबाट सम्झिनुभएको छ ।
एकदमै खुसि लाग्छ मैले केहि गर्दै छु है जस्तो लाग्छ । पक्कैपनि पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ । ७–८ वर्ष पार गरिसके बुझ्दै गएँ धेरै बुझे यो क्षेत्रमा । अझ गर्न त बाँकि नै छ ।
अबको योजना के ?
नयाँ नयाँ प्रतिभाहरु जो आउनुहुन्छ, ट्यालेन्ट हुुनुहुन्छ लाग्न सकिरहनु भएको छैन मैले के गर्न सक्ने सहयोग गर्छु आउनुहोस । मैले बाटो देखाउन सक्छु । राम्रा राम्रा प्रतिभाहरुलाई संरक्षण गर्न चाहान्छु । सबैले बुझेर सिकेर आउन पनि अनुरोध गर्छु । मेरो पढाई छ यहि क्षेत्रमा मेल खाने भएकाले यसका साथसाथै म पढाइलाई अगाडि बढाउँछु र मेरो परिवार पनि छ परिवारलाई पनि अगाडि बढाउँछु । सबै चिजलाई सँगसँगै अगाढि बढाउँछु ।
समय कत्तिको दिनुभएको छ अहिले ?
यो एकदम गाह्रो कुरा पनि हो । एक त महिला, सँगसँगै हरेक चिज अगाढि लान गाह्रो हुन्छ तैपनि मैले पहिलो चाँहि म्युजिकलाई नै राखेकी छु । पढाई र परिवारलाई डोहो¥याएको छु । गाह्रो त एकदमै छ तर मैले गाह्रो नमानिकन सबै काम अगाढि लग्दै छु ।
रिता केसिले यहाँहरुलाई विभिन्न किसिमको गितहरु सुनाउन चाहान्छे । मेरो धेरै गितहरु युट्युवमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ । मलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला । यसपाली चाँहि तिज विशेष गित बम बम भोले बजारमा ल्याएकी छु, अर्को नाई नाई नभन मायाले भन्ने दुईवटा गित छ यसपालीको ।
अबको सालमा यहि तिज गितलाई सँधै निकाल्ने छु । जतिसकिन्छ सकेको निकाल्ने छु र सकेजतिमा म आफै अभिनय गरेर मेरो क्षमता निखार्दै जानेछु । यहि क्षेत्रमा रहेर सबैलाई धेरै भरपुर मनोरञ्जन दिनेछु ।